मानिसको तेस्राे नेत्र – www.kamalsfabulous.com/ibook
मानिसको तेस्रो नेत्र
अगाडिका अध्यायहरुमा लिँग शरीरहरु छन् भनेर वर्णन भयो । अब त्यसलाई देख्न, छुन, बोल्न, स्पर्श गर्न पाए अझ कति राम्रो हुन्थ्यो होला ? भन्ने लागेको होला कति पाठकहरूलाई । समाजमा यस्ता कुराका चर्चाहरू बेला बेलामा हुन्छन् तर यो प्रमाण नभएका विषय हुन भन्ने चलन छ । किनकि आजसम्म यस विषयलाई वैज्ञानिक स्तरका प्रमाणित रूपमा प्रस्तुत कसैले गरेको छैन । तर यो लिँग शरीर मानिसले देख्न, छुन, बोल्न, स्पर्श गर्न सकिने चिज हो । यसको स्पर्शहरु मानिसहरुमा, समाजमा बृहद रुपमा भइरहेको छ । संसारभरिका हरेक मानिस, हरेक परिवार, ढिलो वा चाँडो होस यसबाट प्रभावित भइरहेका छन् । सही अर्थ लगाउन नसक्दा यो नदेखिए जस्तो भइरहेको रहेछ । यस्ता लिँग शरीरलाई देख्न सक्ने साधन भनेको मानिसको तेस्रो नेत्र हो । यो तेस्रो नेत्र हरेक मानिसमा हुन्छ । त्यसलाई बुझ्न र चिन्न आवश्यक छ । जसरी मानिस कुनै नयाँ ठाउँमा पुग्दा त्यहाँको भाषा बुझ्न नसके लाटो जस्तो भईराखेका हुन्छन् भने त्यसैगरी मानिसले भाषा नबुझेको भएर मानिसको तेस्रो नेत्र लाटो र निष्कृय भएर बसेको रहेछ । त्यस तेस्रो नेत्रको भाषा बुझ्न अवश्य कठिन होला नत्र आजसम्ममा सबैले बुझि सकेका हुन्थेहोलान् । त्यो भाषा कठिन अवश्य छ तर अध्ययन र अभ्यास भएमा त्यो हरेक मानिसले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । मानिस चाहे ८ – १० वर्षको बच्चाको होस् वा तरुना, वृद्धहरु होस् ती सबैका लागि यो प्राप्त गर्न सम्भव रहन्छ । यो तेस्रो नेत्र भनेको कुनै नया अङ्ग आँखालाई बाहिरबाट ल्याएर शरीरको कुनै भागमा जस्तैः निधारमा, कपाल भित्र लुकाएर, वा पछाडि ढाडमा जोडिदिने अथवा पाठकको इच्छा अनुसार शरीरको सबैले देख्ने ठाउँमा जोडौँला र मेरो तेस्रो नेत्र भन्दै अरुको अगाडि अगाडि गएर देखाउन पाउँला भन्ने होइन । त्यो तेस्रो नेत्र भनेको मानिसको आफ्नो शरीरमा नै भइरहेको यन्त्रहरुको अभ्यास र आवश्यक परिभाषा, ज्ञान, तर्क, अर्थ, भाव बुझ्ने क्षमता भएपछि मानिसले त्यस यन्त्रद्वारा साधारण रुपमा हरेक दिन देख्ने गरेको चित्रह्ररूभन्दा अन्य चित्रहरु र अन्य अर्थभएका भावहरु आउने हुन्छन् । यो नै मानिसको तेस्रो नेत्र हो । यस्को प्राप्तिको लागि तेस्रो नेत्रको ज्ञानका साथ साथै तेस्रो नेत्रको निरन्तर अभ्यास र यस बारेमा स्पष्ट जानेको मानिसको निरन्तर सरसल्लाह आवश्यकता पर्न सक्नेछ ।
हरेक मानिसको तेस्रो नेत्रद्वारा हेर्ने इच्छा —मानिसमा तेस्रो नेत्र हुन्छ भनेपछि त्यस नेत्र प्राप्त गर्ने र त्यसबाट हेर्ने इच्छा धेरै मानिसलाई तुरुन्तै जाग्न सक्दछ । यो नेत्र प्राप्ति हुनु खुसीको अनुभव हो भने प्राप्त गर्नु कठिन अध्ययन र कठिन अभ्यास पनि हो । यो तेस्रो नेत्रको पूर्णज्ञान नभएमा यो एक अस्वस्थ अवस्था समस्या पनि हो । त्यसैले पूर्णज्ञान पाउने वातावरण छैन वा आवश्यक सरसल्लाह गर्ने अनुभवि मानिसहरू साथमा वा नजिक छैनन् वा टाढैबाट, टेलिफोन, इ मेलबाट भने पनि अनुभवि मानिससँग विभिन्न सरसल्लाह माग्न मिल्ने अवस्था छैन भने तेस्रो नेत्रको चाहना राख्नु आफैलाई हानीकारक हुनसक्दछ । किनकि पूर्णज्ञान विना अलि अलि मात्र विकसित भएको तेस्रो नेत्रद्वारा मानिसको त्यस्ता अन्य लिँग शरीरसँग सम्पर्क त हुन जानेछ तर त्यसबाट बच्न सक्ने उपायहरु पर्याप्त नहुन सक्दछन् । यस्तो हुनु भनेको अस्वस्थ भएर झन् विभिन्न दुःख कष्टहरू भोग्नु पर्ने, विभिन्न झैझगडा, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक समस्याहरू, चोटपटकहरू र अकाल मृत्युमा पुग्न सक्दछन् ।
मानिसको तेस्रो नेत्रको अवस्थालाई३भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
१. निष्कृय तेस्रो नेत्रः यो प्रायः स्वस्थ रूपमा रहेका कुनै असाधारण स्पर्शहरू नगरेका मानिसहरूको अवस्था हो । हुन त पूर्णरूपमा तेस्रो नेत्रको अनुभव कहिल्यै नगरेका मानिसहरू नहुनु पर्ने हो अथवा धेरै कम होलान् । कहिले कहिले मात्र असाधारण स्पर्शहरू गरेका, कहिले कहिले मात्र सपना देखिने तर त्यस सपनाको कुनै अर्थ र भाव नलगाउने, भाव नआउने, छिट्टै भुलिने खालका स्पर्शहरुलाई निष्कृय तेस्रो नेत्रको अवस्था हो ।
२. अस्वस्थ तेस्रो नेत्रः मानिसको तेस्रो नेत्र हुँदो रहेछ र त्यो तेस्रो नेत्र विभिन्न कारणले सकृय भइसकेको रहेछ र त्यस तेस्रो नेत्रबाट देखिन आएका चित्रहरू, आवाज, आँखा अगाडि देखिएका सचित्र वा घटनाहरूको सही अर्थ र भाव बुझिएको छैन भने ती तेस्रो नेत्रबाट आएका खबरहरूले गलत अर्थ, तर्क र तरिकाहरू हुन जान्छन् । त्यसरी आफै खुलेर रहेको तेस्रो नेत्र जस्को उचित तर्क र अर्थ लगाउन नसकेको, मानिस यस्ता स्पर्शका कारण अस्वस्थ, कमजोर, बिरामी हुन पुगेको अवस्थालाई अस्वस्थ तेस्रो नेत्र भनिन्छ ।
अस्वस्थ तेस्रो नेत्रको अवस्थामा पटकपटक स्पर्शहरु हुने, छालामा अचानक चिसो वा तातो अनुभव आउने, नाकमा विभिन्न नजीक नभएका चिजहरुको गन्ध आउने, कानमा अरु नै आवाजहरु आउने, कानमा बोलीहरु आउने, कानमा नदेखिने मान्छेहरुले कुराहरु गर्ने, आँखामा अगाडि भएको भन्दा भिन्न चित्रहरु आउने, छायाँहरु आउने हुन्छन् । आँखामा अचानक आँसु आउने हुन्छ । साथै डर, त्रास हुने, चिच्याउने, झस्कने, पैतला मुनिको जमिन भाँसिएको जस्तो लाग्ने, उडाएर लगे जस्तो लाग्ने, जीउ अचानक हल्लाउने, धकेल्ने, फ्याक्ने, जीउ थरथरकाम्ने, अचानक ज्वरो आउने अचानक जाने, अचानक जीउ, हात खुट्टा पैतला एकदम हिउ जस्तो चिसो हुने र केही क्षणपछि आफै जाने हुन्छ । शरीरको विभिन्न भागमा चिलाउने, राता फोकाहरु उठ्ने त्यसै बेलामा विभिन्न लिँग शरीरहरुको याद आएको आयै हुने हुन्छ । त्यस्ता लक्षणहरू आएको बेलामा मरिसकेका मानिसहरूको यादहरू आउने, आफु कुनै ठाउँमा डराएको बेलाको यादहरू आउने, नराम्रा सपनाहरूको यादहरू आउने, आफुसँग भएका झगडाहरूको यादहरू आउने, मन दुखेको अवस्थाहरूको यादहरू आउने हुन्छन् । केही क्षणपछि जब ती याद आउन छोड्दछ र ती लक्षणहरु पनि विलाएर जान्छन् । राती निन्द्रा नलाग्ने, मध्यरातमा निन्द्रा खुल्ने, धेरै बेरसम्म निदाउन नसक्ने र त्यसैगरी निन्द्रा खुलेको बेलामा विभिन्न लिँग शरीरहरुको यादहरु आइरहने हुन्छ । यसरी रातमा निन्द्रा नलाग्ने हुँदा निदाउने औषधी खाएर निदाउन कोसिस गर्दा पनि झन झन दिन प्रतिदिन मात्राहरु बढाउदै जानुपर्ने भएको हुन्छ । सपनाहरु धेरै देख्ने, हरेक दिन देख्ने, एकै दिन धेरै वटा सपनाहरु देख्ने, विहान निन्द्रा नखुल्ने, निन्द्राबाट होस खुलि सक्यो तर आँखा नखुल्ने र सपना देखिरहने भइरहेका हुन्छन् । यी कुराहरुको अर्थ लगाउन जान्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन मानिसलाई र यस्तै कष्ट र अन्योलको अवस्थामा जीवन बितिरहेको हुन्छ र जीवन अस्तव्यस्त हुन थाल्दछ ।
शरीरमा शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, थकावटहरु आइसकेको हुन्छ । घर परिवारमा कठिन अवस्थामा आइ आफु र आफन्तहरुलाई तनावको अवस्था आइसकेको हुन्छ ।
चिकित्साशास्त्रमा वर्णन गरे जस्तो डिप्रेसनका लक्षणहरु अचानक देखिन थाल्दछन्, अचानक रुन मन लाग्ने, मन दुखिरहने, सानोसानो कुरामा पनि मन दुःखेपछि धेरै बेरसम्म वा धेरै दिनसम्म शान्त हुन नसक्ने हुन्छ । आफन्त नजिककाहरुसँग झगडा गर्न मन लागिराख्ने हुन्छ । रातीराती उठेर श्रृङ्गार गर्न मन लाग्ने, रातमा उठेर मायाका गीतहरु गाउन मन लाग्ने या गीतको बोलमा मरेको मानिसको याद गरेर गाइएको गीतहरु गाउन मन लाग्ने हुन्छ । अलि गहिरिएर कष्ट भएको बेलामा मानिस आफ्नो व्यक्तित्व र बानी व्यहोराबाट टाढा पुगेको, स्वादहरु अचानक परिवर्तन भएको, खानाको परिकार परिवर्तन, कपडाको पहिरन फरक, मानिसको रूप(पोष्चर) परिवर्तन भएको देखिन्छ । उ अचानक बुढाबुढीहरुले जस्तो पोष्चर बनाएर घरमा हिँड डुल गरिरहेको हुन्छ । उ ट्वाइलेट, बाथरुम जाँदा, घर वरपर हिड्दा उसको हिडाइ अर्कै मान्छेको जस्तो लाग्दछ । यो अति गहिरिएको अवस्था हो । यदि त्यस बखत अनुभवि मानिसले, आफ्ना एकदम नजिकको मानिसले उससँग केही बेर नजिकका कुराकानी गर्दै तिमी अहिले को जस्तो लाग्दछ या अहिले तिमीले कसलाई याद गरिरहेका छौ भनेर सोधेमा र बिरामीलाई गहिरिएर आँखा चिम्म गरेर हेर्न अनुरोध गरेमा र बिरामीले शान्त भएर त्यसैगरेमा उसले आफुलाई अन्य मानिस जस्तो देख्दछ वा अर्कै मान्छेको जस्तो चाल, बोली अनुभव गर्दछ । बिरामीले आँखा चिम्म गर्दा देखेको मानिसलाई बिरामीले चिन्न सक्ला वा नसक्न पनि सक्दछ । तर त्यहाँ वरपर बसेका आफन्तहरुले गहिरिएर सबैकुरालाई ध्यान दिएमा त्यो नया चाल व्यहोराहरु उनीहरुले चिने जानेका मरिसकेका, भर्खरै मरेकाहरू वा ४०– ५० वर्ष अगाडिका मरिसकेका पितृहरुको जस्तो पनि लाग्न सक्दछ ।
धर्म संस्कारमा गहिरिएर पछि लागेकाहरूलाई तिनै धर्म संस्कारमा उल्लेख, वर्णन र बयान गरिएका देवी देवताहरूको यादहरू धेरै आइरहने, सपनामा पनि त्यही कुराहरू भएको सपनाहरू देख्ने, सरसल्लाह, निर्देशनहरू आएको जस्तो हुने अनि झन तिनीहरूको पछि लाग्छु भन्दा कता हो कता हराएको जस्तो लाग्न थाल्दछ । कोहकोही मानिसहरु यस्तो बेलामा काम्न थाल्दछन्, त्यहि कामेको बेलामा अर्कै नाम, अर्कै स्वर, चालचलन गरेर बोल्ने, ती बोल्नेहरूले आफुलाई के के पुगेन भनेर माग्ने, भविष्यवाणी गरिदिने गर्छन् र आफुलाई भगवान आएर बोलेको हुँ भन्ने गर्छन् । यी सबै अवस्थाहरुलाई अस्वस्थ तेस्रो नेत्रको अवस्था भन्दछन् ।
विभिन्न धर्म र सम्प्रदायहरुमा अदृश्य चिजहरुसँग सम्पर्क गर्ने, बोल्ने, उपचार गर्ने, झारफुक गर्ने, झाँक्री लगाउने, हेराउने प्रचलनहरु हुन्छन् । यी सबै ती उपचारकर्ताहरु आफैको अस्वस्थ अवस्थाको तेस्रो नेत्र हो । किन कि तिनीहरुलाई उनीहरुको अगाडि भइरहेको घटनाको सही मुल्याङ्कन र सही तर्क हुँदैन । सबैले अल्प ज्ञानका आधारमा विभिन्न तर्क, अर्थ र उपचार गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले धेरै दिनदेखि गर्दै आएको काम होस वा पुस्तौँदेखि गर्दै आएको काम होस, त्यस कार्यको बारेमा पूर्ण जानकारी नभएको र वर्णन गर्न नसक्ने हुन्छन् । त्यसैले ती उपचारकर्ताहरुले कहिले सहयोग पुर्याए होलान् भने कहिले झन आगोमा घिउ थपिदिए होलान् ।
कहिले यस्तै घटना र लक्षणका बिरामीहरु डाक्टर कहाँ पुगेका हुन्छन । तर आजसम्मको चिकित्साशास्त्रले यस रोग र लक्षणलाई चिन्न सकेको छैन रहेछ यस राेग र लक्षणलाई मानसिक रागको संज्ञा दिएका हुन्छन् । ती बिरामाीहरूलाई डाक्टरहरूले विभिन्न निन्द्रा लाग्ने औषधीले ती लक्षणहरु केही समयका लागि बाहिर आउन नदिएका हुन्छन । त्यसैले मानसिक रोग सम्बन्धित डाक्टरी पेशामा एउटै बिरामी पटकपटक आउनेलाई साधारण नियम मानिने गरिन्छ । तर भएको कुरा के रहेछ भने ती अदृश्य लिँग शरीरहरुले भन्न खोजेको कुरा भन्न नपाएको र सुन्नेले नसुनेको, नबुझेको भएर त्यही कुरा भन्न पटकपटक आइरहेका हुँदा रहेछन् वा अन्य लिँग शरीरहरुले स्पर्श गरेर शोषण गर्न जानेकाहरु पटकपटक आइ शोषण गर्दा रहेछन् ।
त्यही कुरा नबुझी दिएको भएर एउटै स्पर्श पटकपटक दोहोरिएर आएको हो रहेछ । ती पितृ वा लिँग शरीरहरूसँग पटकपटक सम्पर्क र सम्बन्ध भएकाे भएर झन झन अन्य ग्रन्थिहरु पनि प्रभावित हुँदै लक्षणहरु थपिदै जान्छन् ।
अस्वस्थ तेस्रो नेत्र दुइ चरणमा विकास भएको हुन्छ
१. सुरुको प्रारंभिक अवस्था (Preparatory conditions)
२. पछिको तयार अवस्था (Prepared conditions)
३. स्वस्थ तेस्रो नेत्रः मानिसले अध्ययन गरेर आफ्नो तेस्रो नेत्रको अर्थ बुझेको अवस्थामा ती स्पर्श, गन्ध, आवाज, बोली, चित्रहरु, भावहरुको अर्थ तर्क लगाउन सक्दछन् । सपनामा आएको चित्रहरुको अर्थ, तर्क लगाउन सक्दछन् । सपनामा र अन्य सबै स्पर्शहरुको सारांश गरेर तर्क, विश्लेषण गरेर अर्थ भाव लगाउन सक्दछन् । जब ती अर्थहरु जीवनका अन्य सत्यतासँग गाँसिएको, वास्तविकतासँग सम्बन्धित भएको थाहा हुन थाल्दछ र ती स्पर्शका अर्थहरु एक समाचारका रुपमा लिन थालिन्छ र त्यस अर्थलाई जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन थालेपछि ती अस्वस्थ स्पर्शहरु कम हुन थाल्दछन् । ती अदृश्य लिँग शरीरसँग सम्पर्क भएको कुरा हो भनेर मान्ने, तिनीहरूले भनेको केही मान्न मिल्ने कुराहरू मानिदिने, तिनिहरूलाई दिनु पर्ने कुराहरू र सुझावहरू दिने गर्न सकिन्छ । यो तेस्रो नेत्रका कारण र अर्थबाट अदृश्य जीवहरुसँग दोहोरो सम्पर्क बनाउन सकिन्छ । यस स्वस्थ तेस्रो नेत्रको अवस्थामा सपनाहरु दोहोरो सम्पर्कका माध्यम बनिसकेका हुन्छन्, सपना एउटा ती लिँग शरीरसँगको सम्पर्कको प्रश्न उत्तरका माध्यम बनिसकेको हुन्छन् । त्यस प्रश्न उत्तरद्वारा गरिएका सम्पर्क अनुसारका व्यवहारहरू गरिन थाल्दछन् । यसरी ती स्पर्शका भावहरू बुझ्न थालेपछि ती असाधारण स्पर्शहरु दोहोरिन छोड्दछन् । त्यस्तै जब कहिले कहीँ आँखा चिम्म गरेर गरेर बस्दा पनि आउने चित्रहरुको भाव र अर्थ लाग्दछ यी माथिका अस्वस्थ स्पर्शहरु पनि बन्द हुन्छन् । सपनाको अर्थ लगाउन सक्ने भएपछि अन्य स्पर्शहरु नाक, कान, बोली, छाला, आँखामा आउने स्पर्शहरु कम हुन्छन् । तेस्रो नेत्रको यस्तो विकसित, शिक्षित अवस्थालाई स्वस्थ तेस्रो नेत्र भनिन्छ ।
स्वस्थ तेस्रो नेत्र दुइ चरणमा विकास भएको हुन्छ
मानिसहरूमा अस्वस्थ तेस्रो नेत्रको लक्षणहरू एकै दिनमा नै विकसित भएर आएको होइन । सुरूमा मानिसले नजानेको अवस्थामा लिँग शरीरहरुले सम्पर्क गर्न खोज्दा सुरुमा केही कारण पारेर तर्सने, चिच्याउने, केही चित्रहरु देख्ने, त्यस्ता कुराहरुको चर्चा भइरहेको ठाउमा पुग्ने भएको हुन्छ । त्यसपछि त्यस मानिसले त्यो घटनालाई भुल्न सकेको हुँदैन । पटक पटक याद आइराख्ने, त्यसै घटनाका बारेमा चर्चा गर्न मन लागिरहने हुन्छ । केही वर्षपछि बल्ल अन्य असाधारण स्पर्शहरु अनुभव गर्न सुरु गरेको हुन्छ । यस सुरुको अवस्थामा भएका असाधारण स्पर्शहरु भनेको वास्तविकतामा भएको भौतिक वस्तुहरुको स्पर्शमा आएको अनुभवलाई नै थपिएको अर्कै मात्रामा, अर्कै चित्रमा, अर्कै भावमा स्पर्श हुन आउछ । त्यस थपिएर आएको स्पर्श सँगसँगै डर, त्रास र भावना आउँछन् । यो तयारी गर्ने अवस्था करिब ३ -४ वर्ष देखि १५ -२० वर्षसम्मको पनि हुन सक्दछ ।
लामो समयसम्म अन्य लिँग शरीरको सम्पर्कहरूलाई हो कि होइन हो कि होइन भन्दै समय बिताएको हुन्छ । तर ती घटनाहरूलाई विश्वास नगरे पनि बिर्सन सकेको हुँदैन । ती लिँग शरीरहरू संगको आफ्नो सम्पर्कको मात्रा झन बढेर आउन थाल्दछ । त्यस पछि मानिस घरिघरि टोलाउने, अर्कै दुनियाको बारेमा सोचेर बस्ने, नबुझिने व्यवहारहरू गर्ने गर्दछन् । यस अवस्थामा वास्तविकतामा हुँदै नभएको चिजको आभास हुन्छ । जस्तै कि आवाज, छाया, चित्र, स्पर्शहरु आउँदा छेउमा भएको मान्छेले यि कुरा स्पर्श गरेका हुँदैनन् । बिरामीको मानसिकता तिनै स्पर्शमा डुवेको हुन्छ । चित्रहरु आएको आऐ भइराख्छन् । सपनाहरु देखेको देख्यै भइराख्न सक्छ । दिउसो बसेको बेलामा, हिँडेको बेलामा, सपना देख्न सक्दछन् । छाया जस्ता दृश्यहरु देख्न थाल्दछ । आवाजहरु अझ स्पष्ट गरेर आउन थाल्दछ । आवाजहरु आइरहने गर्दछ । हुँदा हुँदा ती आवाजहरुको सट्टा कानमा आएर बोल्न थाल्दछ । बोल्दा बोल्दा यदि बिरामीले गहिरिएर ध्यान दिन थाल्यो भने पछिपछि ती कानमा बोल्नेको नाम, त्यस सँगको नाता सम्बन्धसम्म थाहा पाउन सक्दछन् । त्यो कानमा बोल्नेहरु अन्य लिँग शरीरहरु हुन्छन् वा आफ्नै मरिसकेका पितृहरु हुन्छन् । ती पितृहरुले सम्पर्क गर्दा कहिले आफु मर्नुभन्दा अगाडिको घटनाको भावमा कुराहरु गर्दछन् त कहिले आफु मरिसकेपछिको घटनाका भावमा कुराहरु गरेका हुन्छन् । पितृहरुले यसरी आएर कुरा गर्दा पनि उनीहरुमा आफ्नो अवस्थाको पूर्ण रुपमा ज्ञान हुँदैन । जस्तै कि स्वस्थ मानिस एकै छिनमा नेपालमा एकैछिनमा अमेरिकामा हुनसक्दैन वा केही मिनटमा त्यहाँ पुग्न सक्दैन, कुनै सवारीको साधन प्रयोग नगरिकन भन्ने थाहा हुन्छ । तर पितृहरु एकैछिनमा यता एकैछिनमा उता पुग्दा पनि ममा यस्तो क्षमता अचानक कहाँबाट आयो भनेर सोच्ने क्षमता हुदैन । यसरी स्पष्टसँग नै पितृसँग कुरा हुँदा त्यस व्यक्तिको मानसिक परिस्थिति नाजुक भइसकेको हुन्छ । असामाजिक भइसकेको हुन्छ । समाजका कुनै पनि, व्यवहार मान्यता र लेनदेन सँहाल्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको हुन्छ । त्यस अवस्थाहरुलाई मैले सिन्ड्रोम रेडीयो (Syndrom Radio) र सिन्ड्रोम टेलिभिजन (Syndrom Television) भनेर हामी लेखक डाक्टरहरूले यस्तो नाम दिएका छौँ ।
क. सिन्ड्रोम रेडियो : अन्य असाधारण स्पर्शका साथै कानमा आएर पनि बोल्ने तर सँगसँगै दृश्यहरुलाई नदेख्ने भएकोले सिन्ड्रोम रेडियो (Syndrom Radio) भनेका छौँ ।
ख. सिन्ड्रोम टेलिभिजन : अन्य असाधारण स्पर्शका साथ कानमा बोल्नुको साथसाथै चित्र, दृश्य पनि देख्ने भएकोले सिन्ड्रोम टेलिभिज (Syndrom Television) भनेका छौँ । Syndrom Television अझ खतरनाक अवस्था हो । यस्तो स्थितिमा भ्रम बढी भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई एक्लै छोड्नु हुँदैन । बिरामी घर छोडेर बाहिर जाने, झ्याल, छतबाट हाम फाल्न सक्दछन् ।
तर यस्तो अवस्थामा पुगेकाहरुको पनि उपचार हुन सक्दछ । यिनै तेस्राे नेत्रको अर्थ जानेको मानिसको सहयोग र परिवारको सहयोगद्वारा यो भुमरीबाट मानिस निस्कन सक्दछ ।
तेस्रो नेत्रको गहिरिएर अध्ययन भइ रहेका अवस्थामा केही पटक Syndrom Radio र केही पटक Syndrom Television को अनुभव आफैले गर्नै अवसर मिलेको छ । आफुले चाहेर होइन तर आफै अचानक त्यस्ता सम्पर्कहरु भएको थियो । ती अवसरमा प्राप्त भएका चित्र र भावहरु सही र सत्य समाचारहरु थिए । सुरुमा ज्ञानको कमी भएको भएर ती दृश्यहरुको अर्थ खुल्न सकेको थिएन । ती चित्र र भावहरु सत्य समाचार थिए भन्ने कुरा करिब ४-५ वर्षपछि मात्र पूर्ण अर्थ खुल्न गएको थियो । कतिपय मानिसहरु यस्तै अवस्थाबाट गुज्रनु परेको होला र सही अर्थ लगाउन नसक्दा अन्य भ्रममा परेका हुन सक्दछन् । अन्य बिरामीको यस्तो सिन्ड्रोमका अवस्था र मेरो अवस्थामा के फरक थियो भने मैले शरीरमा केही अस्वस्थ महसुस गर्न सुरु गरी सक्दा पनि मेरो चेतना, होस पूर्ण रुपमा थियो र यस्ता अदृश्यहरुको बारेमा केही ज्ञान बटुल्न भ्याइ सकेको थिएँ र धेरै बेर भ्रममा पर्नु परेन । करिब घटनाको पहलो मिनटपछि नै ममा असाभारण स्पर्श भएको महसुस हुने गरेको र मलाई कसैले झुक्काउन खोज्दैछन् भन्ने थाहा हुन्थ्यो । कहिले कहिले त यस्तो पनि भयो कि ती महसुसहरु वास्तविक होइनन् भनी थाहा भएपछि पनि ती दृश्यहरु लगातार आइरहन्थे वा फेरीफेरी आइरहन्थ्यो । ती दृश्यहरु पटकपटक गरेर अन्य थपिएका समाचारका (Update) रुपमा पछिपछि पनि आउने गदथ्यो । ती आएका समाचार अनुसारका व्यवहारहरु हुँदै गएपछि ती स्पर्शहरु बन्द भएर गए । पूर्णज्ञान नभएको भएर अति अन्योलको स्थिति थियो । पछिका दिनहरूमा अध्ययन गर्दै गहिरिदै जाँदा थाहा भयो कि यि सबै मेरै कारणबाट घट्न गएका थिए । मेरो यस विषय प्रतिको खोज गर्ने चाहनाहरुले नै मलाइ यस्ता परिस्थितिमा पुर्याएको रहेछन् । ती अदृश्यहरु म सँग सम्पर्कमा आउन खोजेका हुँदा रहेछन् । मानौँ कि तिनीहरुको कुनै भिडमा एक जना अर्कै जातको, अर्कै विचारको, त्यस्तै तर्कहरु मात्र खोज्दै हिड्ने तर बचावट गर्नु पर्दछ नत्र त्यसै आगोले पोल्छ भनेर थाहा पनि नभएको मान्छे आइपुगेछ । त्यसपछि ती भिडमा रमिता भएछ क्यार अनि सबैले मलाइ छुन भ्याए होलान् । कसैले छुने भनेको दुइचार लात र मुड्कि हान्ने भनेर मात्र जानेका थिए होलान् । त्यसरी नै छोएछन् । तिनको मुक्का खाएपछि शरीरमा नदुख्ने ठाउँ कतै रहदैनथ्यो । आफैमा नै घट्न गएका लक्षणहरु भएको भएर बढी गहिरिएर पछिसम्म पनि ती लक्षणहरुलाई केलाएर अध्ययन गर्नै मौका मिल्यो । ती दिइएको समाचारले ठुलो ज्ञान दिएको छ । जीवनभरको लागि आवश्यक अमृत छोडेको छ । जीवनका अदृश्य पानाहरु खुलेका छन् । पछिका अध्यायहरुमा वर्णन गर्नेछु ।
यदि यस्तै स्थितिको अवस्थामा मानिसले स्थुल शरीर त्याग्यो (या हामीले भन्ने गरेको मृत्यु भयो ) भने ऊ तिनै कानमा कुरा गर्न आउनेहरु कहाँ पुग्नगइ भ्रममा नै रह रहन सक्दछ । त्यसैले स्थुल शरीरको त्याग गर्ने बेलामा सही होसमा हुनु मृत्युपछिको जीवनको लागि बाटो खुल्नु हो ।
जब अस्वस्थ तेस्रो नेत्रबाट उत्पन्न असाधारण स्पर्शहरुको परिस्थितीमा जब मानिसले मानिसको तिनवटा शरीर हुन्छ, अन्य अदृश्य लिँग शरीरहरु हुन्छन्, मानिसमा तेस्रो नेत्र हुन्छ, सपनाको अर्थ हुन्छ, ती लिँग शरीरहरु तिनै सपनाको माध्यमबाट वा अन्य स्पर्शहरुको माध्यमबाट मानिससँग सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन् भनेर ज्ञान भएपछि ती सम्पर्क अनुसारको भाव निकालेर व्यवहार गर्न थालेपछि स्वस्थ तेश्रो नेत्रको अवस्था सुरु हुन्छ । यस अवस्थामा सबै जसो अन्य अङ्गको स्पर्श र त्रासहरु हराएर जान्छन् । सम्पर्कमा भन्न खोजेका कुराहरुको भाव र अर्थ अनुसारका व्यवहार गर्न थालेपछि, सम्पर्कहरु कम हुदै जान्छन् । लगातार आइराख्ने असाधारण स्पर्शहरु कम भएर जान्छन् । सपना मात्र एक सम्पर्कको माध्यम बाँकी भएर रहेको हुन्छ ।
सर्वसाधारण मानिस यसै अवस्था मा नै रहनु उचित हुन्छ । अस्वस्थ अवस्थालाई काटेर, तेस्रो नेत्रको ज्ञानलाई साथमा राखेर, कहिले कहिले मात्र देखिन थालेको सपनाका सही अर्थ लगाएर, पर्दा पछाडिका अदृश्य संसारको कुराहरुलाई दिमागको कुनै कुनामा थन्काए, घरीघरी नकोट्याएर, तीसँग सम्पर्कमा आउन सक्ने सबै माध्यमहरुलाई बन्दगरेर, ती कुराहरुलाई भुले जस्तो गरेर सँधै आफ्ना दैनिक कार्यमा जुट्नु सबभन्दा असल र उपयुक्त तरिका हो । तेस्रो नेत्रबाट अस्वस्थ अवस्थालाई काटेर, अदृश्य संसारको ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरेपछि यस दुःस्वप्नबाट उम्कने प्रयास गर्नु पर्दछ । उम्कन खोज्दा उम्कन नदिन खोज्दछन भने उम्कन नै नखोज्नु भनेको मानिसको ठुलो दुःखलाई निम्त्याइ रहनु हो ।
यो अवस्थामा मानिसलाई अझ थुप्रै ज्ञान र अभ्यासहरु सँग्रह भइसकेका हुन्छन् । तेस्रो नेत्र र ब्रह्मको ज्ञान गहिरिएर बुझेकाहरूमा अनुभवहरू झन् स्पष्ट भएर आउछन् । यो अवस्थामा आफुले इच्छा गरेको बेलामा अन्य लिँग शरीरसँग सम्पर्क गर्न सक्ने, पितृहरू सँग सम्पर्क गर्न सक्ने, देवी देवताहरू सँग सम्पर्क गर्न सक्ने, ब्रह्मज्ञानी देवी देवताहरू सँग सम्पर्क गर्न सक्ने भएका हुन्छन् । ती ज्ञान र उपायहरु अरुका लागि पनि प्रयोग ल्याउन सक्ने भएका हुन्छन । यस्ता अनुभवहरू मानिसमा हुनु भनेको अदृश्य संसारको रहस्यका बारेमा जानेका महत्वपूर्ण बहुमुल्य व्यक्तित्वहरू हुन । उनीहरूले अरू मानिसलाई सिकाउन सक्दछन्, आवश्यक केही सरसल्लाह मद्दत पुर्याउन सक्दछन् । उनीहरूको सानोसानो सरसल्लाह एउटा उपचारको औषधी जस्तो हुन्छन् कहिले कहीं । उनीहरूद्वारा सृष्टिको आजसम्म अज्ञात रहेको रहस्यहरूका बारेमा प्रत्यक्ष ज्ञान र अनुभवहरू गर्न सकिन्छ । अरू मानिसहरूले यस्ता मानिसहरूको सँधै आदर गरेको हुनु पर्दछ । यिनीहरूको सङ्गतले मानिसले सृष्टि, जीवन,मृत्यु र तेस्रो नेत्रको ज्ञान र अनुभव पाउन सकिन्छ । तर उनीहरू आफै यसरी पटकपटक अन्य लिँग शरीरहरूको सम्पर्कमा आइरहने भएको भएर आफु पूर्ण रुपमा स्वस्थमा भएर बस्न पनि सकेका हुँदैनन् । पटकपटक आफै अस्वस्थ अवस्थामा आइरहेका हुन्छन् । किनकि तिनीहरुको ज्ञानेन्द्रियका, कर्मेन्द्रियका अङ्गहरुको सुरक्षाको आवरण पुरा बन्द नभएको र घरीघरी चुहिएको अवस्थामा रहेको हुन्छ । त्यसैको कारण जीवन कष्टमय रहिरहेको हुन्छ । यस अवस्थामा केही अति अनुभविहरुमात्र कष्ट विहीन हुन सकेका हुन्छन् ।
यस स्वस्थ तेस्रो नेत्रको माध्यमद्वारा सृष्टिका अदृष्य जीवहरूसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यस स्वस्थ तेस्रो नेत्रको क्षमता मार्फत पितृ, देवी देवता साथै ब्रह्मको ज्ञान भएका देवी देवताहरू शिवजी, दुर्गा माता, दुर्गा माताका अन्य रूपहरू, गणेश जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण जी, सीता राम जी लयाएत थुप्रै देवी देवताहरूसँग प्रत्यक्ष दर्शन, भेट, कुराकानी, अन्य लेनदेन गर्न सकिन्छ । यही स्वस्थ तेस्रो नेत्रको क्षमता मार्फत मृत्युपछिको जीवन, मृत्युपछिको जीवनको समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरूको ज्ञान पाउन सकिन्छ । त्यसैले यस स्वस्थ तेस्रो नेत्रलाई हरेक दिन प्रयोग गर्न उपयोग नगरेर सृष्टि, जीवन र मृत्युको वास्तविक रहस्यहरूलाई बुझ्न साधनको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ । स्वस्थ तेस्रो नेत्र भएकाहरूले आफन्त वा चिनजानहरूका मृत्युको खबर मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि थाहा पाउन सक्दछन् कहिले कहिले । ब्रह्मको अनुभव र सदाशिवको अनुभव गर्न स्वस्थ तेस्रो नेत्र प्राप्त गरेका मानिसहरूले मात्र गर्न सक्दछन् । त्यो तेस्रो नेत्र आवश्यक परेको बेलामा उपयोग गर्न पाइयोस भनेर सँधै सुरक्षित र ताजा अवस्थामा राख्न जानेको हुनुपर्दछ ।
तर यसरी पटकपटक सम्पर्कमा आइरहने भएको भएर आफु पूर्ण रुपमा स्वस्थमा भएर बस्न पनि सकेका हुँदैनन् । पटकपटक आफै अस्वस्थ अवस्थामा आइरहेका हुन्छन् । किनकि तिनीहरुको ज्ञानेन्द्रियका, कर्मेन्द्रियका अङ्गहरुको सुरक्षाको आवरण पुरा बन्द नभएको र घरीघरी चुहिएको अवस्थामा रहेको हुन्छ । त्यसैको कारण जीवन कष्टमय रहिरहेको हुन्छ । यस अवस्थामा केही अति अनुभविहरुमात्र कष्ट विहीन हुन सकेका होलान् ।
तेस्रो नेत्रको अनुभव गर्ने उपायहरु
१. आफै तेस्रो नेत्र खुलिरहेको अवस्थाः हरेक मानिसमा निष्कृय रुपमा रहेको यो तेस्रो नेत्र कुनैकुनै अवस्थामा आफै सकृय हुन पुगेको हुन्छ र उनीहरु त्यस्ता अदृस्य अन्य लिँग शरीरसँग सम्पर्कमा आइरहेको हुन्छन् । यो अस्वस्थ र अति खतरनाक अवस्था हो ।
यस्ता अवस्थामा आइपुगेका मानिसहरुलाई विभिन्न व्यक्तिगत समस्याहरु, पारिवारिक समस्याहरु, रोग, कष्टहरुले घेरिरहेको हुन्छ र डाक्टरहरुले यसको सही अर्थ लगाउन नपाउदा बिरामीहरु अन्य रोगहरु र मानसिकहरु रोगसँग दाजिनगइ गलत उपचारको शिकार भइरहेका हुन सक्दछन् । यस्ता अवस्थामा आइपुगेमा मानिसहरुले लिँग शरीरको ज्ञान पाउनु र तेस्रो नेत्रको ज्ञान पाएर ती तेस्रो नेत्रमा आएका भावहरुको सही अर्थ लगाउने र अनुभव गर्ने, त्यस अनुसारका विधिहरु पालना गर्न सकेमा त्यस अस्वस्थ अवस्थालाई स्वस्थ अवस्थामा ल्याउनु सकिन्छ र ती कष्ट र रुवाबासीको अवस्थाबाट उम्कन सकिन्छ । यो मेरो फाल्टु गफ होइन । विभिन्न परिक्षणपछि निकालिएका निचोडहरु हुन् र प्रमाण सहितका तथ्यहरु हुन् ।
समाजमा विभिन्न मानिसहरुमा यस्ता असाधारण स्पर्शका क्षमता अचानक उत्पन्न भएकाहरु थुप्रै हुन्छन् । त्यस्ता असाधारण स्पर्श गर्ने गरेकाहरू लामा, झाँक्री, हेराउने माता, कोही आफुलाई देवी देवताका रूप भनेर भन्ने, त्यस्तै कार्य र रूपहरू गर्दै हिड्ने हुन्छन् । कोही कोही अरुको भविष्यवाणी गर्दै हिड्नेहरु हुन्छन् । ती भविष्यवाणीहरु धेरै जसो मिल्ने हुन्छन् । त्यो भविष्यवाणी गर्नेलाई नै थाहा छैन कि यो क्षमता कताबाट आयो ? उ झन आफ्नो उपचार गर्नुको सट्टा त्यसै अवस्थालाई रोजगार बनाउदै हिँडेको हुन्छ । अत्यमा आएर जीवनभर अरु सबैको भविष्यवाणी गर्दै हिडे पनि उ आफ्नो भविष्यवाणी गर्न सफल भएको हुँदैन । अन्त्यमा आफ्नो जीवन अस्त व्यस्त भइ आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गएको अनुभव हुँर्दै जीवन अन्त्य गरेका हुन्छन् । यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै छन् । कोही कोही आफुलाई भगवानको अवतार हो भन्न भ्याएका हुन्छन् । तिनीले गरेका कतिपय भविष्यवाणी उपचारहरु सत्य थिए त्यसैले तिनीहरूका वरपर हजारौँ, लाखौँ मानिसहरुको भिड रहन्थ्यो होला । तर यी सबै क्षमताहरु वास्तविकतामा उनीहरुको आफै खुलेको तेस्रो नेत्रको अस्वस्थ अवस्था हो । तेस्रो नेत्र के हो भनेर नचिन्नु र ती तेस्रो नेत्रबाट देखिएका स्पर्श, चित्र, आवाज, भावहरूको बारेमा नजानेको अवस्थालाई अस्वस्थ तेस्रो नेत्र भनिन्छ । त्यस अस्वस्थ तेस्रो नेत्रको अवस्थामा अध्ययन र जानेका व्यक्तीको परामर्शद्वारा तेस्रो नेत्र के हो ? र तेस्रो नेत्रद्वारा देखिएका स्पर्शहरूको अर्थ बुझेर तेस्रो नेत्रको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
२. आफैले तेस्रो नेत्र प्राप्त गर्नेः हरेक इच्छुकले आवश्यक अध्ययन र अभ्यास गरेमा सिमित तेस्रो नेत्र खुल्न जान्छ र तेस्रो नेत्रद्वारा प्राप्त हुनुपर्ने अनुभवहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
३. अरुको तेस्रो नेत्रको प्रयोग गरेर अनुभव गर्ने, हेर्ने वा सुन्नेः आफुले नै तेस्रो नेत्रको गहिरो अध्ययन र अभ्यास नगरिकन, त्यस तेस्रो नेत्रको अलिअलि मात्र अध्ययन र अभ्यास गरेर तेस्रो नेत्रको साधारण परिचय प्राप्त गर्ने र अरु तेस्रो मानिसमा विकसित भएको तेस्रो नेत्रको प्रयोग गरेर त्यस्ता चित्र, घटना र भावहरु प्राप्त गरी अनुभव गर्न सकिन्छ । समाजमा अस्वस्थ तेस्रो नेत्र खुलेर भविष्यवाणी गरिदिने, विभिन्न उपचारहरू गरिदिने मानिसहरू हुन्छन् । तिनीहरूसँग गरिएका चर्चाहरूमा केही सत्यताहरू हुन्छन् । ती मानिसहरुको आफ्नो आफ्नो क्षमता होला, कोही बढी जानेका होलान र कोही कम जानेका होलान् । ती सबै अस्वस्थ अवस्था हो तर पनि हामी इच्छुकले गर्न लागेको अध्ययन र अनुभवको उद्देश्यलाई छिट्टै अझ बढी प्रभावकारी र अनुभवि बनाउन ती मानिसहरुको क्षमताको उपयोग गर्न सक्दछौँ । तिनीहरुले गरेका कुराहरु व्यवहारहरु नियालेर हेर्नसक्दछौँ । मलाई यस्ता घटनाहरुमा सन्जोगले केही पटक उपस्थित हुन पुगेको थिएँ र जीवनभरको लागि प्रश्न र जिज्ञासा बटुलेको थिएँ । तिनले गरेका भविष्यवाणीहरु कतिपय यत्ति सत्य थिए कि यो कुरा कुनै पनि आधुनिक विज्ञानको कल्पना भन्दा बाहिरको थियो । इच्छुकहरुलाई यस्ता अनुभवहरु बटुल्न लेखकले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । तर त्यस्ता ठाउँहरुमा उपस्थितभइ केही क्षणीक भाग लिनुको हाम्रो उद्देश्य प्रत्यक्ष घटनाहरुमा सहभागी हुनु हो र अनुभव बटुल्नु हो तर तिनै कुराहरुमा अल्झेर र तिनले बताए अनुसारका विश्लेषण र उपचारका विधि अपनाउने उद्देश्य होइन ।
अथवा यस किताब पढिसकेका वा यस किताब पढेर र परामर्शहरू प्राप्त गरेर आफ्नो अस्वस्थ तेस्रो नेत्रको अवस्थाबाट स्वस्थ तेस्रो नेत्रको अवस्थामा पुगेका मानिसहरूको सम्पर्कबाट आफुलाई चाहिने तेस्रो नेत्रको अनुभवहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसपछि यी प्रत्यक्ष तेस्रो नेत्रको अनुभव बटुलेर ती कुराहरुको वैज्ञानिक अर्थ के हो त भनेर खोजी गर्न यो किताब अझ गहिरिएर पढ्न अनुरोध गर्दछु । यो किताब नै यस कुराहरु बुझ्न सकिने छोटो बाटो हो जस्तो लाग्दछ । यस्ता कुराहरु विस्तृत वर्णन गरेको संसारमा अन्य किताबहरु छैनन् नखोजे पनि हुन्छ । किनकि लेखकले खोजेर पनि पाउन सकेको थिएन ।
यसरी अरु मानिसको खुलिसकेको तेस्रो नेत्रको उपयोग गरेर आफ्नो अध्ययनको लागि आवश्यक अनुभव जोड्ने भनेको सबभन्दा उत्तम तरिका हो सर्व साधारणहरुको लागि । त्यसो गर्दा त्यस तेस्रो नेत्र प्राप्त गर्न लाग्ने समय बच्ने र त्यसबाट हुन सक्ने विभिन्न प्रहारहरु र नराम्रा प्रभावहरुबाट बच्न सकिन्छ । तर जबसम्म मानिसले आफ्नो तेस्रो नेत्रको आवश्यक ज्ञान र विकास गरेको हुँदैन उसले यस किताबको वास्तविक रहस्य, भाव बुझ्न सक्दैन र साथ साथै सृष्टिको, जीवनको, मृत्युको रहस्य र भाव पनि बुझ्न सक्दैन । जुठो खानु मिठोको लोभले भने जस्तो हो । यो दुःख खानु सृष्टिको रहस्य, मानिसको जीवनको र मृत्युको रहस्य बुझ्ने उद्देश्यले हो । हरेकको आफ्नो आफ्नो इच्छा र खुसी हो । लेखकले केवल पाठकलाई हरेक परिस्थितिको बोध गराउन चाहेको हो । जब मानिसले तेस्रो नेत्रको बारेमा स्पष्ट जान्नेछ उ समाजमा सबभन्दा निडर, बुद्धिजीवी, बाठो अनुभवि, जेठो, भावनाले सँधै तरुनो हुनेछ ।
तेस्रो नेत्रका अभ्यासहरु गर्न आवश्यक सतर्कता
१. सतर्क हुन नजानेर अभ्यास गर्नुः
सुरक्षाका उपायहरु गर्न नजानिकन अभ्यास र सम्पर्कहरु गर्नेहरु— आजसम्मको स्थितीलाई मध्यनजर राखेर भन्ने हो भने मानिसलाई स्पष्ट रुपमा मानिसको अङ्गहरुको र तेस्रो नेत्रको ज्ञान रहेनछ । विभिन्न मानिसमा विभिन्न कारणले केही तेस्रो नेत्रको क्षमता सिमित रुपमा विकास भएको हुँदो रहेछ । अगाडिका पाठमा उल्लेख गरिएका विभिन्न लिँग शरीरहरु, देवी देवताहरुका बारेमा स्पष्ट ज्ञान नहुँदा पनि केही मानिसहरुमा अन्जानमा खुल्न गएको तेस्रो नेत्रको क्षमतालाई विभिन्न उद्देश्यले प्रयोग गरिरहेका रहेछन् । ती तेस्रो नेत्रबाट देखिएका चित्र र भावहरुलाई अल्पज्ञानका आधारमा आफ्नै तरिकाले वर्णन गर्दै ती लिँग शरीरहरु, देवी देवताहरुका बारेमा जान्ने पल्टेर आफ्नै तरिकाले वर्णन गर्दै विभिन्न तर्क र उपायहरु गर्न अगाडि सरिरहेका, गरिरहेका, अझ कसैकसैले त्यसलाई नै रोजगारको माध्यम बनाइरहेकाहरु धेरै मानिसहरु छन् र त्यस्ता मानिसहरु अन्य मुलुकहरूमा पनि रहेछन् । यदि कुनै मानिसले यस्ता कार्यहरु गरिराखेका छन् भने यो अति खतरनाक जीवन शैली बनाएका रहेछन् । त्यस्ता अभ्यास र प्रयासमा तेस्रो नेत्रद्वारा जुन दृश्य र स्पर्शहरु आउछन् र जो सँग सम्पर्क हुन जान्छ आफु पनि तिनीहरूसँग नै बाँधिएर तिनीहरूका खाडलमा जाकिन जाने सम्भावना र निस्कने उपाय नजानेको भएपछि त्यहीँ तिनीहरुसँग नै बस्नु पर्ने अवस्था आइपर्न सक्दछ । त्यसैले यो अति खतरनाक अवस्था हो । हुन सक्दछ यो कुरा आजसम्म कसैलाई थाहा नभएको हुन सक्दछ तर मैले यो कुरा स्पष्ट अनुभव गरेको अवस्था हो ।
२. सतर्क हुन जानेर अभ्यास गर्नुः
सुरक्षाका उपायहरु अपनाउन जानेपछि मात्रै अभ्यास र सम्पर्कहरु गर्नेहरु—पूर्णज्ञान र सुरक्षाका उपायहरु जानेपछि मात्र ती लिँग शरीरहरु, देवी देवताहरुलाई हेर्ने, देख्ने, छुने अन्य स्पर्शका अभ्यासहरु गर्ने । ती सुरक्षाका उपायहरु भनेको लिँग शरीरको बारेमा अनुभव गर्न कुनै अभ्यासहरु गर्नुभन्दा पहिला ती लिँग शरीरहरुको बारेमा स्पष्ट हुने गरेर अध्ययन गर्ने र तेस्रो नेत्रको बारेमा कुरा स्पष्ट बुझ्ने गरेर अध्ययन गर्ने हो । ती अध्ययनका लागि आवश्यक सामाग्री वा पाठ्यपुस्तक भनेको यही किताब हो । यस किताबको प्रमुख भाव भनेको मानिसहरुले ती लिँग शरीरहरुसँग सम्पर्कका आउने इच्छा राख्न हुँदैन, सम्पर्कमा आइहाल्न पुगिएछ भने पनि त्यस्ता सम्पर्कबाट टाढा हुनुपर्दछ भन्ने कुराको बोध भइसकेको हुनु पर्दछ । त्यसपछि मात्र गरिएका सम्पर्कहरुबाट बच्न जानिन्छ र बच्न सकिनेछ । जस्तै कि बाटो हिड्दा कुनै अन्जानको, नौलो, अचम्मको व्यक्ति भेटहुन गएमा हामीले केही क्षण यसो ध्यान लगाएर हेरेर केही बुझ्ने इच्छा, केही कुराकानी गर्ने इच्छा, केही सोध्ने इच्छा राखेर केही बेर सम्पर्कमा आए पनि उ सँगसँगै कता हो कता जान हामी तुरुन्तै तयार हुँदैनौँ । त्यसैगरी भर्खर तेस्रो नेत्र खुलेका बेलामा विभिन्न लिँग शरीरहरूसँग कुराकानी होला, केही आनन्दको अनुभवहरू होलान् तर ती सम्पर्कमा पूर्ण रूपमा नचिनिएकाहरूको साथ लागेर सँधै तिनीहरूले भनेको मान्ने गर्न हुँदैन भनेर जानेको हुनु पर्दछ । आफुभन्दा जानेको मानिसहरूसँग सरसल्लाह लिने गरेको हुनुपर्दछ । कमसे कम यत्तिक मात्र बुद्धि र भावना राख्न सकेमा पनि हामी धेरै बचावट गर्न सक्नेछौँ । नत्र ती अन्जानका लिँग शरीरहरुसँगको भेटमा देखाइएका अति मित्र भावले र अझ तिनीहरुबाट के के न पाइन्छ होला, अब धन सम्पत्ति पाइने भो, सबै आँटेका कुरा पुरा हुने भो, छोराछोरी जाँचमा सजिलैसँग पास हुने भए भन्ने भाव आएमा तिनीहरुले सँधै हाम्रोपछि लाग्न सक्ने र हाम्रो जीवनका हरेक क्षणमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने, सहभागी हुन खोज्ने हुनसक्दछ । ती अन्जानका लिँग शरीरहरुले केही पनि दिँदैनन् बरु खोस्न सकेछन् भने खोस्लान् भन्ने कुरा लेखकले सल्लाहदिन चाहन्छ सबैलाई । हामीलाई थाहा पनि नहुन सक्दछ कि त्यो अन्जानको परिचितले हाम्रो पिछा छोडेको छैन भनेर । हो त्यस्तै भइरहेको हुन्छ खास गरेर मृत्यु भइसकेकाहरुसँग मित्र भाव राखिराखेका मानिसहरुको जीवनमा ।
तेस्रो नेत्रद्वारा ती अन्य लिँग शरीरहरुलाई स्पर्श गर्ने, छुने भनेको आफुले पनि छुन पाइने र उनीहरुले पनि हामीलाई छुन सक्ने हुन्छ होला । स्पर्शका माध्यम खुल्न जाँदा उनीहरुले पनि हामीलाई छुन चाहे छुन सक्नेछन् । ती अन्य लिँग शरीरहरु मध्य कसैले छुने भन्ने शब्दको अर्थ बिस्तारै अलि कति मात्रै छुने हो भन्ने बुझेका होलान् भने कसैको छुने भनेको अर्थ यही मौका हो राम्ररी छुने भनेर दुइचार लात र दुइचार बक्सिङ्ग हानेर नाकमुखबाट रगत निकालेपछि मात्रै छोएको चित्त बुझ्नेहरुपो छन् कि ? अन्जानमा नजानेर त्यस्ता रिसाहालाई छुन गइएछ भने त्यस्तै हालत होला पनि । ऐ त्यस्तो पनि हुन सक्छ भन्लान कसैले ? विश्वास नभए चिडियाखानाको खोर भित्र राखेको बाघ वा सिँहको यसो नाक तिर छुन जाउ, तिनको नाकको जुँगा तान्न जाउ अनि थाहा हुन्छ । त्यस्तै हो ! अँधेरोमा हात फैलाउँदै खोज्दै जाँदा के के फेला पर्छ पर्छ । के के छोइन्छ छोइन्छ ? हो त्यस्तै भइराखेको हुँदोरहेछ । त्यसैले बुझेको जानेकोहरुसँग सोधेर, सोध खोज गर्दा बचावटका विधि अपनाउन सिकाउँछन् नत्र नजानिकन गरिएका अभ्यासहरुबाट त्यस्तैगरी अर्काको नाक कान समात्न गएको जस्तो हुन सक्दछ ।
मानिसले नबुझिकन सधैँ गर्ने गरेको पूजा, विभिन्न ध्यानहरु, जपहरु गर्ने भनेको तिनै लिँग शरीरहरुको वा देवी देवताहरुको कहिले नाक, कहिले कान समाति दिने, घरिघरि जाँदै अन्य केही अङ्ग तानिदिने गरेको जस्तो भयो होला । सँधै गइ नाक कान समात्न गइएछ भने जत्तिसुकै नरिसाउनेको त झोँक चल्छ भने त्यसैमा पनि रिसाउनेमा नाम कमाएका भगवानको नाक समाउन पुगिएछ र तिनले रिसाएर धकेलिदिएछन् भने त फेरि अर्को पटक तिनको नाक समात्न धेरै जुनी कुर्नु पर्नसक्दछ । थाहा नपाईकन गरेको काम भनेको प्वालमा हात पुरा छिराएर अँध्यारोमा नदेखिकन बेसरी चारैतिर खोजेको जस्तो हो । अँध्यारोमा खोज्छु भन्दा आफैलाई हानी पुर्याउने धारिला तथा काट्ने कोप्ने चिजहरूमा हात पर्न सक्दछन् । त्यसैले अगाडिका पाठमा वर्णन गरिएका अदृश्य जीवहरुको परिचय र तिनको गुणको पूर्णज्ञान विना संसारमा यदि कुनै शिष्यले वा गुरुले ॐ भनेर ध्यान गर्ने गरेका छन् भने तिनीहरूले त्यसैगरी कि त दुःख कष्टहरू दिनेहरूको सम्पर्कमा पुगे होलान् या त आफैले खोजेका भगवानकहाँ पुगेका रहेछन् भने पनि भगवानका कहिले नाक समात्ने, कहिले मुख थुनि दिने गरेका छन् होला । कति भक्तहरुसँग भगवान् वाक्क भइसके होलान् भने कतिसँग वाक्क पर्ने बेला हुन लागेको होला ।
मैले यस्तो तेस्रो नेत्रको कुराहरु गर्दा अरु थुप्रै मानिसहरुले पनि यस्ता तेस्रो नेत्रका कुराहरु जानेका होलान् र आवश्यक परे उनीहरूले पनि सिकाउन सक्लान् । अरु मानिसको खुबिको मलाई आइडिया अलि छैन । कोही धुनि लगाएर तिनै लिँग शरीरका साथ गाँजा तानेर बस्ने गरेका छन् कि वा तिनै लिँग शरीरहरु सँगसँगै खाँने, सँगसँगै बस्ने, सँगसँगै सुत्ने गरेका छन् कि ? त्यस्तै अनुभव गराई दिन्छु भनेर भन्छन् भने त झन राम्रै भयो । त्यसै गर्नु उचित हुन्छ । म त्यस्तो अनुभव दिलाउने जिम्मा लिन सक्दिन । तर घाउ, चोटपटक धेरै नलाग्ने गरेर र जीन्दगीभर याद हुने गरेर ती अदृस्य लिँग शरीरहरूको दुइचार लात, दुइचार बक्सिङ्ग खाएको अनुभवका साथ आफ्नै घरमा, स्वास्नी छोराछोरी कहाँ फर्केर आउनेसम्म म गराइदिन सक्छु । धेरै टाढा पुर्याउने जिम्मा लिन सक्दिन तर आफु पुगेको, आफुले भोगेको अनुभवहरु म गराउन र बुझाउन कोसिस गर्नेछु । मैले त्यस्तै बक्सिङ्ग र लात धेरै खाएको अनुभव छ र बल्ल बल्ल गरेर निस्केको हो रेस्लिङ्गको रिङ्गबाट । म पनि केही नबुझिकन त्यस्ता अदृश्यहरु छन् वा छैनन् भनेर खोज्न थालेछु र थाहै नपाइकन म तिनीहरुको बक्सिङ्ग र रेस्लिङ्गको रिङ्गमा पुगिसकेको रहेछु । खेल सुरु भइसकेको र मेरो प्रतिध्वन्दिले विभिन्न स्टाइल स्टाइलले हिर्काएको र लडाएको पनि बुझेको थिइन । मेरो अगाडि म रेस्लिङ्गमा लड्दै गरेको र मलाई लडाएको चित्रहरु आउथ्यो । मेरो अगाडि यस्तो चित्र किन आउछ मैले बुझेको थिइन । पटकपटक मलाई पछारेर पछि म उठ्न कोसिस गर्दा कसैले थिचेर घोप्टो पारेको पारै गरेको मात्रै थाहा हुन्थ्यो । पछि कसैलाई माया लागेछ क्यारे मलाई त्यस खेलको रिङ्गबाट बाहिर ल्याइ दिएछन् र म बाँचेछु । मेरो अनुभवलाई यस्तै यस्तै अनुभवहरुले पनि भरिएको छ । तिनीहरुबाट प्राप्त मुख्य कष्टको प्रहारहरु कम भइसकेपछि आफ्ना अनुभवहरुलाई केलाएर बुझ्दै अर्थ लगाउँदै जाँदा पछि अलि अलि थाहा भएको हो । अलि अलिमात्र थाहा पाएँ भन्नुको मतलव मैले यहाँ जत्ति अनुभवहरु लेख्न पोख्न सकेपनि त्यहाँका सबै कुराहरु त मलाई पक्कै थाहा भएन होला र थाहा हुने कुरा पनि भएन । म त्यहाँ पुगेको अनुभव गरेको बेलामा म शान्त भएर कापीकलम हातमा लिएर आवश्यक कुराहरु टिप्दै अरुकुराहरु सिक्दै गरेको जस्तो थिएन । मानौँकि त्यहाँ मेरो रुवाबासी, भागाभाग थियो र कुन दिसा तर्फ भाग्ने र कहाँ कोसँग गुहार माग्ने पनि थाहा नभएको अवस्था थियो । त्यस बखत मेरो जीवनमा एक सेकेण्ड पनि शान्त थिएन । कुनै न कुनै समस्याहरु, दुखाइहरु, तर्साइहरु, स्पर्शहरुले घेरेको घेरै थियो । अलि कति शान्त हुन थाल्यो भने परिवारका अरु सदस्यहरुलाइ दुःख कष्ट हुन जान्थ्यो । सुरुमा ती दुःखकष्टहरु अन्य लिँग शरीरसँगको सम्पर्कका कारण पैदा भएका हुन् भन्ने थाहा थिएन । कति रोग कष्टहरु भए, कति औषधी उपचार गरियो, हस्पिटल भर्ना भइयो, सानासाना अपरेसनहरु गराइयो । ती कष्टहरुको टुङ्गो नै थिएन । पछिपछि ती स्पर्शहरु अझ बढी भएर आउन थालेपछि केही शङ्काहरु जाग्न थाल्यो र यी समस्याहरुको जरो र कारण कतै अर्कै छ कि त भनेर गहिरिएर हेर्न थालेपछि र भइसकेका कष्टहरुलाई र अन्य लक्षणहरुलाई जोड्न खोजेर कतै नसोचेको भने पनि केही एक आपसमा सम्बन्ध छन् कि भनेर हेर्न खोज्दा केही आधारहरु फेला पर्नथाले । अझ गहिरिएर अध्ययन र खोजी गर्नथालेपछि ती अन्य लिँग शरीरलाई मैले कहिले कहिले देख्न सक्ने हुनथालेँ । यसरी बिस्तारै बिस्तारै सबै घटनाहरुलाई केलाएर अर्थ तर्क लगाउन थालेपछि धेरैकुराहरु खुल्न थाले । उपायहरु र युक्तिहरु निकाल्न थालेँ । म अति घमण्डी रहेछु त्यस्तो कष्टहुँदा पनि मैले कुनै लामा, झाँक्रीको सहयोग वा अन्य यस विषयमा जानेका मानिसहरुको सहयोग लिन चाहिन । कहिल्यै नसुनेको नजानेको चिजहरुसँग स्पर्श हुनगइ कष्टहरु पैदा हुँदा पनि मैले यी सबै मेरो जिज्ञासाका कारण उत्पन्न भएका समस्याहरु रहेछन् भने म आफैनै यस्को टुङ्गो लगाउछु भनेर जिद्दी गरेर सहेर बसेँ । तर सन्जोगले त्यस भुमरीबाट उम्कन सकेँ र बुझ्न सकेका अनुभवहरुलाई केलाएर लेख्न थालेको हुँ । त्यसैले मैले भोगेका अनुभवहरुलाई अलिअलि भनेर भनेको हुँ । त्यो अलि अलि अनुभवमा नै सन्तोष गर्नु मानवजातीको लागि उत्तम होला । यो भन्दा अझ धेरै थाहा पाउछु भन्दा धेरै अनुभव थाहा त पाउने अनि आफु मरेर उताको उतै भइयो भने कस्लाई भन्ने ती अनुभवहरु ? त्यस्ता खतराले भरिएको छ त्यो लिँग शरीरहरुको संसार । तर पनि विभिन्न युक्ति लगाएर आफुलाई हानी नहुने गरेर बुझ्न जरुरी छ । किनकि हाम्राहरु पितृ त्यहीँ छन् । मृत्युपछि हामी त्यहीँ लिँग शरीरहरुको संसारमा पुग्नेछौँ । पहिले नै बुझेको, जानेको ठाउँमा पुग्दा मानिसको सुरक्षा बढी होला जस्तो लाग्छ ।
जीवनमा जस्ले सही रुपमा तेस्रो नेत्रको ज्ञान र उपयोग गर्न जान्दछ त्यो व्यक्ति आफु र सबै आफन्तहरूका साथ सँधै सुखी हुनेछ । उसका जीवनका सबै बाटाहरु खुल्न थाल्नेछन् । सही रुपमा जानेको खण्डमा मात्रै नत्र अलि अलिमात्र जानेको खण्डमा के खतरा हुनसक्दछ माथि भनिसकियो ।
ए हैन ! यो नदेखिने कुरा वा चिजको यत्रो लामो कुरा किन गरि राख्नु पर्यो ? देखिने चिज भए पहिला पहिला नै त देखि हाल्थ्यो होला ? भनेर भन्लान कसै कसैले ।
यस्को विश्लेषण गरौँ ।
यो लिँग शरीरहरू नदेखिने चिज अवश्य हो । तर नदेखिने चिजलाई पनि देख्न सक्ने हुनुपर्छ । मानिसले नदेखिने चिजहरुलाई विभिन्न युक्ति लगाएर देख्न सक्ने गरेका छन्, चिन्न सक्ने गरेका छन् । नदेखिने चिजको प्रकृतिलाई चिनेर त्यस अदृश्य चिजहरुबाट बचावट वा फाइदा लिने गरेका छन् । चिनीको स्वाद नदेखिए पनि चिनी चिन्न, प्रयोग जानेका छौँ । गन्धलाई नदेखिए पनि मानिसले सुगन्ध, दुर्गन्ध मात्रै भनेर नचिनेर केको सुगन्ध, केको दुर्गन्ध भनेर थाहा पाउन सक्दछन् । कोही कोही केटीहरु त मानिसले लगाउने सेन्ट(अत्तर)को गन्धद्वारा कुन नामको सेन्ट हो भनेर छुट्याउँछन् । आफुले लगाउने गरेको सेन्ट(अत्तर) अरुले लगाएको छ भने मानिसको भिडमा पनि थाहा पाउन सक्नेहरु देखेको छु । कोही मानिसहरु स्वादबाट रक्सीको ब्य्राण्ड थाहा पाउछन्, स्वादबाट चिया कफीको ब्य्राण्ड थाहा पाउछन् । यो भनेको मानिसको भइरहेको अङ्गहरुको गहिरिएर गरिएका प्रयोग र अनुभवहरु हो । त्यसरी नै सिधा रुपमा नदेखे पनि अन्य लक्षणबाट कतिकुराहरु देख्न, स्पर्श गर्न सकिन्छ । जस्तै हावालाई रुखको पात हल्लेको आधारमा र त्यसबाट निस्केको आवाजको आधारमा चाल पाइन्छ र मात्रा थाहा पाइन्छ । मानिसको अनुहार हेरेर कतिपय उसको बिचारहरु बुझ्न सकिन्छ । मानिस खुसी भएको वा दुखि भएको कुरा उसको अनुहारबाट बुझ्न सकिन्छ । सिनेमाहलमा शो सिद्धिएपछि अचानक मानिसहरुको भिड बाटोमा देखिन्छन् त्यसैको अनुभव भएकाहरुले बाटोमा मानिसको अचानक भिड देख्दा यहाँ वरपर त्यस्तै सिनेमाहलहरु छन् होलान् र भर्खरै शो सिद्धियो होला भनेर अडकल काट्न सक्छन् । जङ्गलमा कुनै लास कुहेको ठाउँमा वरपर चराहरु गिद्धहरु झुम्मिएका हुन्छन् त्यसैले मानिसले वरपर अचानक गिद्धहरु देख्न थाले भने यहाँ वरपर कतै जनावरका कुहेको लासहरु होलान् भनेर अड्कल काट्दछन् । बन्द पानीकाे ट्याङकिमा पानी आएकाे आवाजबाट थाहा पाउन सकिन्छ अनुभव भएकाहरूलाई । त्यसैगरी विभिन्न बाङ्गो उपायहरु लगाएर त्यस अदृश्य लिँग शरीरहरुसँग भएको सम्पर्कको अर्थ लगाउन सक्नु पर्दछ । पछिका पाठहरुमा अलि विस्तिृत बयान गरिएको छ ।
यो तेस्रो नेत्रको विषय आधुनिक विज्ञान र चिकित्साशास्त्रको लागि नौलो हो । यस बारेमा विज्ञानले कुनै तर्क या विरोध गरेको छैन । धार्मिकशास्त्रमा खुलस्त रुपमा केही व्यक्त गरिएको छैन । वेदशास्त्रहरूमा भिन्न भिन्न सन्दर्भमा भगवान् शिवजीको तेस्रो नेत्र भएको कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै विभिन्न ब्रह्मका ज्ञान भएका देवी देवताहरुले ध्यान दृष्टिद्वारा हेर्नु भएको भनेर उल्लेख छ । यस्तो उदाहरणले के बुझाउँछ भने अदृश्य संसार र लिँग शरीरहरुलाई साधारण नेत्रले देख्ने सकिने हैन रहेछ । गन्धलाई आँखाले नदेखे जस्तो हो । त्यसैले मानिसले आफ्नो साधारण आँखाले लिँग शरीर वा देवी देवतालाई देखिन भनेर आफ्नो टाउको दुखाउनु पर्दैन । त्यो लिँग शरीरहरु वा देवीदेवताहरुलाई हेर्न भिन्दै कुनै अङ्ग या अर्कै तरिका रहेछ ।
तेस्राे नेत्रको उदाहरणहरु वेदशास्त्रहरूमा पटकपटक वर्णन गरिएको छ । भगवान् शिवजीले भगवान रामचन्द्रजीलाई सृष्टिको रुप देखाउने बेलामा दिब्य दृष्टि प्रदान गर्नुभइ सृष्टि विराट स्वरूप देखाउनु भएको थियो । भगवान् शिवजीले भगवान् रामचन्द्रलाई सृष्टि देखाउनु भएपछि केही बेरमा त्यो दिब्य दृष्टि फिर्ता लिनु भएको थियो । महाभारत पुराणमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई त्यस्तै दिब्य दृष्टि दिनु भएर सृष्टिको विराट स्वरुप देखाउनु भएको थियो र पछि केही बेरमा त्यो दिब्य दृष्टि फिर्ता लिनु भएको थियो । ब्यास ऋषिले सँजयलाई दिब्य दृष्टि दिनु भएको थियो र पछि काम सिद्धिएपछि फिर्ता लिनु भएको थियो । देवी दुर्गा माताहरुले त्यस्तै दिब्य नेत्रद्वारा हेर्नु हुन्थ्यो भनेर वेदशास्त्रहरूमा कथाहरु छन् । त्यस्ता आफ्ना प्यारा भक्तहरुलाई दिइएको त्यो दिब्य दृष्टिको सानो चस्मा जस्तो सँधैको लागी तैँ राख भनेकाे भए पनि हुन्थ्यो होला । तर सबैले पछि काम सिद्धिने वित्तिकै फिर्ता मागेछन् । यसको मतलव हो यो सबैले लिएर हिड्ने जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर लगाएर दिब्य दृष्टिले हेर्ने चिज होइन रहेछ क्यार । वेदशास्त्रमा भगवानसँग थियो भन्दैमा मान्छेमा पनि त्यो दिब्य दृष्टि हुन सक्दछ त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । वेदशास्त्रका कथाहरुमा दिब्य दृष्टि भगवानसँग मात्रै नभएर महाभारत पुराणका साधारण नोकर सँजयले पनि यो क्षमता प्राप्त गरेका थिए । तर मानव जातिमा यस्तो प्रकारको तेस्रो नेत्र हुन्छ भनेर कुनै वेदशास्त्रमा सिधा उल्लेख छैन । तर सबै कुराको उत्तर वेदशास्त्रहरूमा मात्रै खोजेर बसेर पनि जीवन नचल्ला । जीवनमा भेटिएका कतिपय घटनाहरु कतै वेदशास्त्रमा पनि र विज्ञानमा पनि उल्लेख छैन् । पछि कतै भेटिएला तर हाल कतै नलेखिएका तर देखिएका घटनाहरु थुप्रै छन् ।
मानिसमा देवी देवताहरुका जस्तै विकसित तेश्रो नेत्र त अवस्य पनि छैन होला । मानिसलाई अर्जुनले पाउनु भएको जस्तै विराट स्वरुप हेर्ने सक्ने दिब्य नेत्र चाहिदैन पनि र विराट स्वरुप देखाइ दिने पनि यहाँ कोही छैनन् । तर मानिसलाई कहिले कहिले चाहिन्छ भनेर त्यस्तै दिब्य नेत्रको सानो भाग तेस्रो नेत्रको रुपमा रहेको रहेछ । त्यो तेस्रो नेत्र सुषुप्त अवस्थामा रहेको हुँदो रहेछ । विभिन्न कारणले ती सुषुप्त अवस्थामा रहेका तेस्रो नेत्र खुल्न जाँदा त्यस्को अर्थ र तर्क बुझ्न नसकि गलत अर्थ र तर्क लगाइएको हुँदो रहेछ र कहिले कहीँ विभिन्न अन्य मानसिक रोगहरुसँग दाँजिन जाँदा डाक्टरहरुको निदाउने औषधी र कहिले कहीँ पागलखानाका बन्द ढोकामा विताउनु परेको पनि हुन सक्दोरहेछ ।
वेदशास्त्रहरुमा उल्लेख भए अनुसार त्यो दिब्य दृष्टि भगवानहरुले फिर्ता लिनु भएको रहेछ । कतै हामीले प्राप्त गरेको तेस्रो नेत्र पनि फिर्ता दिनु पर्ने हो कि ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ मानिसमा । मानिसको जात नै यस्तो छ, अरुलाई दिनु पर्छ भने बरु म पनि लिन्न भन्ने खालको बिचार आउला । तर त्यसो होइन । वेदशास्त्रहरुमा भगवानले आफैले दिनुभएको थियो र अलि उच्चकोटिको नेत्र थियो होला र फिर्ता लिनु भयो । यो हामीले प्राप्त गर्ने तेस्रो नेत्र अलि कमसल खालको नै हो र आफैले मिहिनेत गरेर प्राप्त गरेको भएर कसैलाई फिर्ता दिनु पर्दैन । तर यो तेस्रो नेत्र प्राप्त गरे पनि सँधै प्रयोग गर्ने चिज पनि होइन । यो तेस्रो नेत्र एक पटक प्राप्त गरेर त्यसको प्रयोगबाट सृष्टिको रहस्य बुझ्ने मौका पाउने हो । त्यसपछि त्यस तेस्रो नेत्रलाई कतै नदेखिने ठाउँमा थन्काएर राख्नु नै उत्तम हुन्छ । नत्र तेस्रो नेत्र पाएको झ्वाँकमा श्रीमतीले पस्केको खानालाई पनि तेस्रो नेत्रले हेर्न थाल्यो भने त्यहाँ खानामा त केही भेटिनै छैन त थाहा छ तर श्रीमान टोलाएको देखेर श्रीमतीले डाडुले टाउकोमा हान्न बेर लाग्नेछैन । त्यसैले होसियार हुनुहोला ।
त्यसैगरी अन्य मानिसहरुको जीवनमा घट्दै आइरहेका विभिन्न घटनाहरु र आफुसँग पनि घटेका विभिन्न घटना र अनुभवहरुको आधारमा, वेदशास्त्रले झल्काएका कुनै कुनै झिल्काहरुको विश्लेषणको आधारमा र मेरो यस विषयको धेरै वर्ष देखिको गहिरिएर गरेको अध्ययनबाट यो कुरा स्पष्ट हुन आएको छ कि मानिसमा हामीले देख्ने गरेको दुइटा नेत्र का साथ साथै अर्को कुनै तेस्रो नेत्र पनि छ । त्यस अर्को तेस्रो नेत्रबाट देखिएका चित्र र भावहरु अर्थ पूर्ण छन् । मानिसको यस तेस्रो नेत्रको बारेमा सबै मानिसलाई, वैज्ञानिकहरुलाई, डाक्टरहरुलाई जानकारी गराउन र प्रमाणित गराउन चाहन्छु ।
मानिसको तेस्रो नेत्र भनेको कुनै अर्को आँखालाई हामीले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखेको छ भन्न खोजेको हैन । यो तेस्रो नेत्र यिनै हामीले देखि आएको जानि आइरहेको शरीरका ज्ञानेन्द्रियका ग्रन्थिहरुले प्राप्त गर्ने गरेको स्पर्शहरु र त्यसबारेमा अन्य केही थप जानकारीहरु हुन् । मानिसले साधारण रुपमा गर्दै आएको स्पर्श, भाव र अर्थ भन्दा पनि केही बढी चिजहरु देख्ने, स्पर्श गर्ने गरेको, चित्र र भावहरु प्राप्त गर्ने गरेको तर त्यसको अर्थ लगाउन नसकेको अवस्थाहरु हुन् । यो तेस्रो नेत्र भनेको असाधारण स्पर्शको अवस्था हो । विभिन्न अवस्थामा मानिसले असाधारण खालका स्पर्शहरु गर्न थालेका हुन्छन् । कानमा अन्य आवाजहरु आउने, आँखामा अन्य चित्रहरु आउने, छाला, नाक, जिब्रोले अन्य असाधारण स्पर्शहरु गर्ने गर्दछन् । सपनाहरु देख्ने गरेको हुन्छ । साथै आखा बन्द गरेको बेलामा विभिन्न चित्र र भावहरु आउन सक्दछ । कहिले आँखा खुला भएको बेलामा अगाडि भएको चित्रको ठाउँमा अर्कै चित्र र भाव आउने हुन्छ । यी सबै मिलाएर निकालिएको निष्कर्ष तेस्रो नेत्रका लक्षणहरु पनि हुन सक्दछन् ।
तेस्रो नेत्रको अध्ययनको दुइ चरणहरू हुन्छन् ।
क. पहिलो चरणमा तेस्रो नेत्रबाट देख्न सिक्नुः
स्पर्शहरू हुनु, आँखामा चिम्म गर्दा वा नगर्दा पनि चित्रहरू देख्नु, सपनाहरु देख्नु ।
तेस्रो नेत्र हुन्छ भनेर मानिसलाई देखाउनु, बुझाउनलाई केही अध्ययन र अभ्यासपछि नै सम्भव हुन सक्दछ । यो भईरहेका स्पर्शहरुलाई बुझाएर हेर्न सिकाउने हो । यो कठिन हुदैन ।
ख. दोस्रो चरणमा तेस्रो नेत्रबाट देखेको चिजको भाव अर्थ बुझ्न सिक्नुः
त्यस स्पर्श र चित्र, सपनाको भावहरू बुझ्नु ।
तर त्यस प्राप्त भएको तेस्रो नेत्रको स्पर्श, चित्रहरुको सही भाव निकाल्न अझ धेरै अध्ययन र अभ्यासको जरुरत पर्दछ । यो अर्थ निकाल्न कठिन हुन्छ । यो भाव निकाल्नलाई जानेकाहरुलाई पनि सँधैभरि एक कठिन हिसाबको उत्तर निकाले जस्तो अनुभव भइरहन्छ । यो क्षमता नै तेस्रो नेत्रको अध्ययनको सबभन्दा प्रमुख र महत्व पुर्ण भाग हो । सबैले यो गर्न वा तुरुन्त सिक्न, जान्न असम्भव हुन्छ । त्यसैले तेस्रो नेत्रद्वारा देखिएका स्पर्श र चित्र, चित्रसँग आएको भावलाई पूर्ण भाव दिन अरु जानेको मानिसकहाँ पुगेर सोधेर अर्थ लगाउने गर्नु पर्छ । कुनै कुनै अर्थहरु सुरुसुरुमा आफैले लगाउने गरे पनि जानेको मान्छेसँग पनि आफ्नो अर्थ मिलेको वा नमिलेको भनेर सोध्नु अझ राम्रो हुन्छ । किनकि यो तेस्रो नेत्रमा आउन खोजेका कुराहरु अर्को अदृश्य संसारबाट हामीलाई भन्न खोजेका कुराहरु हुन् । ती समाचारहरुको सही अर्थ नलगाउदा कहिले कहीँ ठुलो बेफाइदा र असुरक्षा हुन सक्दछ ।
मानिसहरुलाई यही भाव लगाउन सिकाउने मेरो सब भन्दा महत्व पूर्ण काम हुन आएको छ । विना भावको तेस्रो नेत्रको अर्थ र महत्व हुँदैन । मैले यस विषयमा गरेका अध्ययन र अनुभवका सँग्रहलाई बाड्न चाहन्छु । विभिन्न लिँग शरीरहरु चिन्न सक्ने, तिनीहरुसँगको सम्पर्क, सम्बन्ध र बचावट गर्न सक्ने र आवश्यक दोहोर सम्पर्क, लेनदेन गर्न सक्ने ज्ञान बाड्न चाहन्छु ।
आजकाे आधुनिक युगमा पनि तेस्रो नेत्रको कुरा गर्नु, पितृ, भुत, प्रेत, देवी देवताहरूको चर्चा गर्नु अझ तिनीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सकिन्छ भनेर चिकित्साशास्त्र पढेका डाक्टरहरूले लिखित रूपमा लेख्नु अवस्य आश्चर्य र नपत्याउने कुरा जस्ता लाग्न सक्दछ । तर यो कुराहरू समाजमा र सर्वसाधारण मानिसहरूमा महामारी रोग जस्तो गरेर फैलिएर बसेको थियो र धेरै जना मानिसहरू पितृ, भुत, प्रेत, देवी देवताहरूका नराम्रा प्रभावमा ग्रसित थिए । आज हामीद्वारा संचालित परामर्श क्लिनिकमा यस्ता समस्या भएका मानिसहरू परामर्श लिन आउँछन् । हामी उनीहरूको समस्या व्यथाहरूलाई सुनेर बुझेर रअन्य विभिन्न जाँच विधिहरूद्वारा जाँच गरी उनीहरूको अस्वस्थ तेस्रो नेत्रको अवस्था पत्ता लगाएर उपचारका सरसल्लाहहरू दिएर स्वस्थ अवस्थामा ल्याइएका बिरामीहरू छन् ।
उपचार क्रमका बिरामीहरूका प्रत्यक्ष सचित्र (भिडियोहरू) हेर्न यहाँ जानु
मानिसको तेस्रो नेत्र हुन्छ भनेर प्राप्त गरेकाहरूको लिष्ट हेर्न ⇒ यहाँ जानुस
स्वस्थ तेस्रो नेत्र, ब्रह्म र कैवल्य मुक्तिका अनुभवहरु गरेका मानिसहरूको लिष्ट हेर्न ⇒ यहाँ जानुस